Umvavanyi wokujonga umphezulu, iMitha yokuRhabaxa-KAIRDA
Ubambiso kwi-portable ultrasonic Flow Meter TUF-2000H uQinisekiso kwi-Portable ye-ultrasonic Flow Meter sisixhobo esilinganayo somlinganiso wophando lokuhamba kunye nakwizicelo zombhobho ezivaliweyo apho umlinganiso ongafunekiyo wolwelo uyafuneka kwaye usebenza ngokuthembekileyo ikakhulu kumanzi acocekileyo. Iimpawu eziphambili: Ukuchaneka okuphezulu kokulinganisa • Ukungqinisisa okungafunekiyo kokulinganisa kwi-transducer, akukho kuhla koxinzelelo, akukho kuphazamiseka kombhobho • Uluhlu olubanzi lokulinganisa ukusuka kwi-DN15mm ukuya kwi-DN6000mm ngokwe-transducer eyahlukeneyo.
I-Digital Ultrasonic Flaw Detector KUT600 Digital Ultrasonic Flaw Detector KUT600 inokuhlola ngokukhawuleza, ngokulula nangokuchanekileyo, ifumanise, ivavanye kwaye ichaze iziphene ezahlukeneyo kwiziqwenga zomsebenzi ngaphandle kokutshatyalaliswa. I-KUT600 ngumatshini ophathwayo ongonakalisi isiphene somatshini, ulungiso oluzenzekelayo, Ukufumana okuzenzekelayo • kukho imigangatho eli-14 ye-DAC e-KUT600 • Ukukhawulezisa okukhawulezileyo kunye nengxolo ephantsi kakhulu • Inkumbulo enkulu ye-1000 A igrafu. Isoftware ye-pc enamandla kunye neengxelo zinokuthumela ngaphandle zigqwesile.
I-Portable Leeb Hardness Tester
I-Digital Leeb Hardness Tester KH200 ifaka uvavanyo lweLeeb Rebound kuluhlu olukhulu lwezinyithi. Ukusetyenziswa ngokubanzi kuvavanyo kwi-Die cavity of molds, Ukunikela kunye nezinye iindawo, uhlalutyo lwesitya soxinzelelo, umvelisi womphunga kunye nezinye izixhobo, umsebenzi onzima, umatshini ofakiweyo kunye neenxalenye ezihlanganisiweyo. Iimpawu • Inomsebenzi wokulinganiswa kwexabiso lokuqalisa, qinisekisa ukuba idatha iyasebenza kwaye ichanekile kwiikhowudi nakwimigangatho eyahlukeneyo; • Inokuxhathisa okuchaseneyo nongcangcazelo, s ...
Olu vavanyo lwe-Leeb Hardness Tester lolokuvavanywa kobulukhuni kwizinto ezahlukeneyo kumashishini amaninzi, izixhobo zovavanyo zibandakanya isinyithi kunye nentsimbi yentsimbi, intsimbi ye-alloy, intsimbi engenasici, isinyithi esingwevu, i-ductile iron, i-aluminium alloy alloy, i-alloy zinc alloy (ubhedu), itini yobhedu I-alloy (ubhedu), ubhedu olucocekileyo, isinyithi esenziwe ngesinyithi. Ubunzima besicelo kufuneka buchazwe njengokuchasana nezinto ezibonakalayo, apha ngezantsi zezona zicelo ziphambili zokuba ngumvavanyi wobulukhuni obuphathekayo obusetyenzisiweyo. Die kwisisu zomngundo Ukunikela i ...
Umphezulu wePocket Roughness Tester KR110
Umphezulu wePocket Roughness Tester KR110 Pocket Surface Roughness Tester KR110 sisixhobo esidityanisiweyo esidityanisiweyo esincinci. Iiparamitha ziRA, RZ, RQ, RT Ngexesha lokulinganisa, inzwa iqhutywa ngamalungu achanekileyo, ihamba ngokuthe ngcembe kubude bokubetha, ngaxeshanye, incam yesenzi yenzwa ishukunyiswa isonyuka isiya phezulu nasezantsi ngokuhambelana noburhabaxa bomhlaba, intshukumo yentsingiselo ibangelwe i-piezoelectric chip deformation, emva koko ikhuphe intlawulo yombane, imiqondiso iyandiswa, ihluziwe kwaye ifakwe kwikhompyutha. th ...
Iimveliso eziphambili zi-Surface Roughness Tester, i-Ultrasonic Gauge Ukutyeba, Ukwaleka Ubukhulu be-Gauge, i-Portable Hardness Tester ...
I-KAIRDA GROUP CORPORATION yasekwa ngo-Disemba wama-2010, iNkokeli eyenza i-NDT e-China. iphumelele ukuthembeka kwintengiso ...
Iimveliso zethu zinewaranti ukuya kwiminyaka emibini kunye nolondolozo lobomi bonke. Siza kubonelela ngoqeqesho lolondolozo kunye nezixhobo ngexabiso leendleko.
I-KAIRDA izinikele ekudaleni ixabiso kumzi-mveliso we-NDT wehlabathi njengomsebenzi wakho, ungagungqi ukubonelela ngeemveliso ezifanelekileyo ...
I-Leeb Hardness Tester ephathekayo inokumisela ngokulula nangokukhawuleza ubunzima bentsimbi.
Unxiba njani imaski yobuso ngokuchanekileyo
1. Ngaphambi kokuba unxibe imaski yobuso, hlamba izandla zakho ngcono. 2.Qiniseka ukuba umaleko ongaphandle onxibe ngaphakathi olicala elinombala okanye onga ...
Uqinisekiso lomgangatho nokuthembeka.
I-Desktop Manual yeRockwell Hardness Tester HR-150A isetyenziselwa ukumisela ubunzima beRockwell yesinyithi esinyithi, isinyithi esingenantsimbi kunye nezinto ezingezizo zesinyithi. Isantya sokufakwa koxinzelelo kovavanyo sinokuhlengahlengiswa sisixhobo sokubambisa, kwaye utshintsho loxinzelelo lufunyenwe ngokujika koxinzelelo olukhetha ivili lesandla. Ukusebenza komvavanyi kulula kakhulu, ngelixa ukusebenza kuzinzile kwaye ke umvavanyi unokusetyenziswa kuluhlu olubanzi. Ingcaciso yeModeli HV-30T yoXinizelelo lokuqala 98 ...